अण्डा कति खाने कसरि खाने त जान्नुहोस् अण्डा का फाइदा अनि बेफाइदा को बारेमाSamachar Pati
अण्डा कति खाने कसरि खाने त जान्नुहोस् अण्डा का फाइदा अनि बेफाइदा को बारेमा
अण्डालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ । धेरैजसो पन्छीको अण्डा खाइने भए पनि संसारभर धेरैले खाने अण्डाचाहिँ कुखुराकै हो । यसबाहेक हाँस, बट्टाई, अष्ट्रिच आदिका अण्डा पनि धेरैले रुचिपूर्वक खाने गरेका छन् । वन्य पन्छीहरू ढुकुर, कालिज तथा तित्राका अण्डा पनि निकै रुचाइन्छ । यसो भनौँ, मानिसहरू पाएजति पन्छीका अण्डा खान बाँकी राख्दैनन् । ती सबैका अण्डामा केही फरक विशेषता हुने भए पनि सामान्यत सबैमा एकै प्रकारको गुण पाउन सकिन्छ ।
‘सन्डे होस् वा मन्डे, रोज खाओ अण्डे’ भन्ने हिन्दी भनाइ छ । यो भनाइले अण्डा खान प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ ।
चीनमा झण्डै दश लाख मानिसमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार दिनमा कम्तीमा एउटा अण्डा खाएर मुटु रोगको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
वि्रटेनका पोषणविद् डा. फ्यन्की फिलिप्स अनुसार अण्डा जति पनि खान सकिन्छ । त्यसमा कुनै शंका छैन । तथापि अधिक मात्रामा अण्डाको सेवनले शरीरलाई अन्य खानाबाट पाइने आवश्यक पोषण तत्व प्रदान हुँदैन । त्यसैले त पोषणविद्हरू सन्तुलित आहार सेवन गर्ने सल्लाह दिने गर्छन् ।
डा. फिलिप्स भन्छन्, ‘यस किसिमको कुनै एलर्जी छैन, उनीहरूले अण्डालाई कुनै पनि तरिकाले पकाएर खान सक्छन् तर अण्डालाई कसरी पकाइन्छ भन्ने कुरामा भने विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’
कपाल झर्ने र फुल्ने समस्याले पिडित हुनुहुन्छ १ त्यसो भए यस्तो गर्नुस्
दशैंमा स्थगित अनसन फेरि सुरु गर्दै डा. केसी
बेलायती अध्ययनका अनुसार सिसाका गिलासमा पानी खानु स्वास्थ्यका लागि हुन्छ हानिकारक